WINDOWS 10 ကိုအတွက်ကွန်ယက်အမည်ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ကဘယ်လို - WINDOWS ကို - 2019
Windows 10 ကိုအတွက်ကွန်ယက်အမည်ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ကဘယ်လို
သငျသညျ (ထိုချိတ်ဆက်မှု၏သင်္ကေတကို right-click - ဆက်စပ် menu ထဲကသင့်လျော်တဲ့ option ကို) Windows 10 ကိုအတွက်ကွန်ယက်နှင့်မျှဝေခြင်းစင်တာသွားလျှင်သင်တစ်ဦးတက်ကြွကွန်ယက်အမည်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်, သင် "ပြောင်းလဲခြင်း adapter settings" ကိုသွားနေဖြင့်ကွန်ယက်ကိုဆက်သွယ်မှုများ၏စာရင်းကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
မကြာခဏဒီဒေသခံဆက်သွယ်မှုများအတွက်နာမတော်သည် - "ကွန်ယက်" ကြိုးမဲ့နာမကိုအမှီဖို့ "Net က 2" ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်၏နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ကိုက်ညီပေမယ့်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ Windows 10 ကိုအတွက် network connection များခင်းကျင်းပြသနာမကိုအမှီပြောင်းလဲပစ်ရန်မည်သို့မည်ပုံ - နောက်ထပ်ညွှန်ကြားချက်။
ဒါကြောင့်အသုံးဝင်သောဖြစ်နိုင်သည်ဘယ်သို့သောအကြောင်းအရာနည်း သငျသညျမျိုးစုံကွန်ယက်ကိုဆက်သွယ်မှုရှိသည်နှင့်ရှိသမျှသော "ကွန်ယက်" အမည်ရှိလျှင်ဥပမာ, အဲဒါကိုခက်ခဲတိကျတဲ့ connection ကိုသိရှိနိုင်ဖို့ပါစေနိုင်ပြီး, အထူးအက္ခရာများကို အသုံးပြု. အချို့ကိစ္စများတွင်မှားယွင်းစွာပြသနိုင်ပါသည်။
မှတ်ချက်: အဆိုပါနည်းလမ်းသည် Ethernet ဆက်သွယ်မှုများအတွက်အဖြစ် Wi-Fi ကိုချိတ်ဆက်မှုအတွက်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သို့သျောလညျးအဆုံးစွန်သောအမှု၌, ရရှိနိုင်ကြိုးမဲ့ကွန်ရက်များစာရင်းအတွက်ကွန်ရက်အမည် (သာကွန်ယက်ထိန်းချုပ်စင်တာ) ကိုပြောင်းလဲမပေးပါဘူး။ သင်ကပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုအပ်လျှင်သင်သည်အဘယ်မှာရှိသနည်း router ကို၏ setting ထဲမှာလုပျနိုငျသညျ, ညွှန်ကြားချက်များကိုတွေ့မြင် :. ငါဘယ်လို (အဲဒီမှာဖော်ပြထားနှင့် SSID သို့ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကိုပြောင်းလဲပစ်သည်) Wi-Fi ကိုအပေါ်စကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲရန်ကြဘူး။
Registry Editor ကို အသုံးပြု. ကွန်ယက်၏နာမတော်ကိုပြောင်း
Windows 10 ကိုအတွက်ကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှု၏အမည်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ရန် Registry Editor ကိုသုံးစွဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်ပါတယ်။
Registry Editor ကို Start (စာနယ်ဇင်းသော့ဝင်း + R ကိုဝင် regedit လို့ထိုအ) Enter နှိပ်ပါ။
Registry Editor ကိုမှာစာရင်း (လက်ဝဲဘက်အပေါ်ဖိုင်တွဲ) ကိုလမ်းညွှန် မိုက်ကရိုဆော့ဖ Windows NT CurrentVersion NetworkList Profiles HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE
ဤအပိုင်းကိုအတွင်းပိုင်းကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုသိမ်းဆည်းထားပရိုဖိုင်းနဲ့ကိုက်ညီတစ်ဦးချင်းစီ၏, တစျခုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုပုဒ်မခွဲဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီအများအတွက်ပရိုဖိုင်းကိုရွေးပါနှင့် (Registry Editor ကို၏ညာဘက် panel ကိုမှာ) ProfileName parameter သည်အတွက်တန်ဖိုးမှာကွန်ယက်အမည်ကိုကြည့်ရှု: သင်ပြောင်းလဲပစ်ချင်သူတို့ထဲကတစ်ဦးကိုရှာပါ။
အဆိုပါ ProfileName parameter သည်၏တန်ဖိုးကို Double-click နှိပ်ပြီးကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုအတွက်နာမသစ်ကိုသတ်မှတ်။
Registry Editor ကိုပိတ်လိုက်ပါ။ နီးပါးညာဘက်ကွန်ယက်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှုစာရင်း၏ဗဟို, နာမည်ပြောင်းလဲမှု (ကမပါလျှင်, ရပ်ဆိုင်းခြင်းများနှင့်ကွန်ယက်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ရန်ကြိုးစား) ၌တည်၏။
ဒါကအားလုံးရဲ့ - ပေးပြီခံခဲ့ရသည်အဖြစ်ကွန်ယက်အမည်ကိုပြောင်းလဲပြသနေသည်: သင်တွေ့မြင်နိုင်သည်အဖြစ်ရှုပ်ထွေးဘာမျှမ။
သငျသညျရှာဖွေရေးကနေဒီကို manual လာလျှင်စကားမစပ်, သင်ကွန်နက်ရှင်၏အမည်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ရန်လိုအပ်သောအရာကိုရည်ရွယ်ချက်များအတွက်မှတ်ချက်များအတွက်ဝေမျှမပေးနိုငျပါမညျနညျး
ဗီဒီယို Watch: Best Upcoming Windows 10 Features in 2019 (စက်တင်ဘာလ 2019).